Dị iche iche R & D-eme gụnyere Nkwadebe, ngwaahịa ule usoro na ụkpụrụ maka chemical ngwaahịa. Anyị ụlọ ọrụ bụ ebe agglomeration nke ihe ọmụma, na nkà na ụzụ, talent na ndị ọzọ na-achọpụta ihe ọhụrụ ọcha, na-emezu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ na onodu nke aku na uba na ụwa na ngwa mmepe nke ihe ọmụma na aku na uba.
R & D Ìgwè
Anyị ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nnyocha imekọ ihe ọnụ ìgwè. N'otu oge ahụ, anyị na ìgwè iso nke-eto eto doctoral ụmụ akwụkwọ bụ ete, nke tọrọ talent ntọala maka ngwa mmepe nke R & D. The otu agbasoghị echiche nke na-achụ nke kacha mma na mgbe na-agwụcha, na-agbalịsi ike na-enye anyị anyị hụrụ n'anya ahịa ezi mma ngwaahịa.
Anyị eguzobewo imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Research laboratories na ulo oru bases e guzobere nile China, gụnyere headquaters na Shanghai, ulo oru isi ke Jiangshu, Zhejiang na Hubei. Anyị nwere ike iji na-emepụta àgwà ngwaahịa nakwa dị ka n'ibelata gburugburu ebe obibi mmetọ, akụ na oriri ike maka mmepụta.